Taliyaha Cuusb ee Ciidanka Booliska Puntland oo Maanta xilka la wareegay – Radio Daljir
Taliyaha Cuusb ee Ciidanka Booliska Puntland oo Maanta xilka la wareegay
Agoosto 10, 2015 7:13 b 0
Isniin, Ogoosto 10, 2015 (Daljir) —Taliyaha cusub ee ciidanka Booliska Puntland CabdirisaaqMaxamuud Yuusuf (Afguduud) ayaa maanta kala wareegay xilkaas taliyihii hore ee ciidamada booliska Puntland Gen. Maxamed Siciid Jaqanaf ka dib munaasbad xil wareejin ahayd oo lagu qabtay magaalada Garowe.
“Afartii sano ee aan joogay hadaan idin dhaho ziiro baan wax ka bilaabay been idiin ma sheegin ,horey halkan ugama jirin waxyaabaha aad hadda indhiihiina ku arkaysaan ,dhamaan waxaan dhisay xafiisyadii booliska Puntland ,“ ayuu yiri Maxamed Siciid Jaqanaf oo ka hadlayay waxqabadkiisi intii uu xafiiska joogay.
“Waxaan tababarro siinnay ciidamada booliska qaybahooda kale duwan si ay uga hortagaan fal kasta oo amniga liddi ku noqon kara “ ayuu mar kale yiri Jaqanaf oo sheegay in uu ku faraxsanahay in uu xilka ku wareejiyo taliyaha cusub.
Wasiirka amniga Puntland Cabdi xirsi Qarjab ,agaasimaha guud ee wasaaradda Cadaalada ,saraakiil ciidan iyo qaar kamid taliyayaasha saldhigyada degmooyinka gobolka Nugaal ayaa ka qayb-galay munaasabadda xil wareejinta.
“Farxad gaar ah ayey ii tahay inaan la wareego maamul ciidan oo waqti badan la galiyay ,inta aan joogo waxaan diiradda saari doona horumarinta iyo qalabaynta ciidanka iyo la dagaalanka cid kasta oo amniga dhibaato ku ah “ ayuu yiri taliyaha cusub oo isna ka hadlay goobta.
Ugu danbayn,madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Afguduud u magacaabay taliyaha ciidanka booliska Puntland maalmo ka hor ,waana markii labaad oo mas’uulkan uu taliye ciidan ka noqdo maamuladii horey uga soo jiray Puntland.
Dowladda Puntland oo Shaacisay Natiijada Imitxaanka Fasalka 8-aad ee Dugsiyada Dhexe ee Puntland
AMISOM oo Raali-galin ka bixisay Dilka dad shacab ah oo ay ku toogteen Marka